Fanatontoloana sy haitao vaovao – Blaogin'i Voniary
Raha ireo teny efatra ireo no asehonao ny ankizy malagasy ankehitriny, « Fanatontoloana sy haitao vaovao », dia ny roa ihany no ho azony : « sy » ary « vaovao ». Eny tokoa, mihasarotra ny fampitana ny teny malagasy amin’ny ankizy sy ny tanora noho ny firoboroboan’ireo teny avy any amin’ny firenen-kafa. Tsy eo amin’ny sehatry ny fampianarana ihany, fa na eo amin’ny andavanandrom-piaina­na sy ny ao an-tokantrano koa aza.
Vao tsy ela, tsy misy herintaona akory aho izay no tapa-kevitra fa tsy hanafohy teny malagasy intsony rehefa manoratra fa hanaja tsara ny tsipelina. Ny teny frantsay nefa hatramin’izay no efa nanajako an’io fitsipika io. Nanano sarotra aloha tamin’ny voalohany, indrindra ilay mifanerasera amin’ny mitovy taona amin’ny tena ao amin’ny tambazotran-tseraser­a ao ! Mainka moa ilay hakizintinana rehefa mahita ny fomba fanoratry ny sasany
« F manin nju n ts mamal mich, sa teztr enw »…
Ny dokambarotra izany moa dia izay fanononana azy eo ihany no anoratana azy. Mino aho nefa fa tsy hoe tsy fahaizana akory, na sendra litera latsaka, fa tena fanahy iniana mihitsy mba hanaitra ny maso sy ny sofina. Toa hoe tsy maharaka ny toetrandro ianao raha tsy manao tsipelin-jatovo e ! Hany ka tsy vitsy ny efa nahazoazo taona no minia manaraka an’izany lamaody vaovao izany.
Fampianarana fitsipipitenenana malagasy notanterahin’ny Teny Gasy 2.0 cc: Sitraka Feno Tanteraka
Soa fa eo ireo mpandala ny teny malagasy. Eny tokoa, mbola misy ireo andry iankinan’ny fiampitan’io tenintsika io amin’ny taranaka ho avy rehetra. Indrindra fa ireo teny tsy dia fampiasa, tsy fandre firy, fa hita ihany any anaty tranonkala any, na any anaty boky koa. Efa novakianao ve ilay « Lisy Mianjoria » ? Io no boky amin’ny teny malagasy ankafiziko indrindra. Tsy mena-mitaha amin’ireny tantara foronina mampangitakitaka rehetra ireny e ! Raha ny faniriako aza moa, mba avoaka horonan-tsary izy iny.
Avy eo, raha resaka fifanakalozana indray, tena ilaina indrindra ny teny malagasy. Mirakitra kolontsaina tsy itambarantsika amin’ny hafa izy io, haren-tsaina mbola azo trandrahina tsara. Tsy eo amin’ny tontolon’ny asa soratra samihafa ihany, fa hatrany anaty lalaon-teny samihafa, ny fampivadiana ny teny sy ny rima, ny feon-kira, ny ady hevitra, ny fandresen-dahatra isan-karazany. Impiry niakatra an-dapihazo moa aho izay, raha im-polo kely, fa vao indray mandeha monja no niseho sehatra imasom-bahoaka amin’ny teny malagasy.
Ankoatra izay, ny tena ilàna betsaka indrindra an’io tenintsika io dia ny fampitana fahalalana eny amin’ny tontolo ambanivohitra. Nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ny tena, fa tena sahirana tsy misy toy izany nony injay nidina teny amin’ny tantsaha niara-niasa taminay. Misy an’ireny teny hitanao tany an-tsekoly ireny, tsy mbola nisy nanazava anao tamin’ny tenindrazanao. Soa fa eo ireo mpitahiry azy. Raha sendra voambolana na tekinika vaovao kosa nefa, dia azo itokisana tsara ny teny malagasy fa mahalaza ny tiana ambara amin’ny fomba tsotra sy takatry ny rehetra. Voly vary maro anaka ohatra e !
Farany indrindra, dia ireo teny vaovao tsy dia fandre loatra, nefa fampiasa eny amin’ny Akademia. Tsy hiteny aho ny hoe : ilay fomba fanisa vaovao tsy dia mahazatra loatra. Efa fantatsika izay. Fa ny faniriako, raha ireo teny vao « namboarina » na novolavolaina ireo, mba haparitaka ho hain’ny rehetra ny hampiasa azy !
Ka manomboka izao, hampiasa an’io tenintsika io aho isan’andro hiresahako amin’ireo mpianatro. Indrindra koa mba tsy ho tompony mangataka atiny ireo zanaka malagasy ireo. Hanohy hanitsy ireo zandry minia manimba maso. Mampirisika koa an’ireo mpanoratra hanohy haneho ny kantony. Hiady ho an’ny fampiasana ny teny malagasy eny anivon’ireny fifaninana hainteny samihafa ireny. Hiezaka hampiasa ireo voambolana vaovao sy hampahalala azy ireny ho an’ny hafa. Fa ampinga iray azo entina hanapariahana sy hanomezana ainga vao ho an’ny teny malagasy ny fanatontoloana sy ny haitao vaovao !
fampandrosoana, lahatsoratra blaogy, teknolojia, teny malagasy, voambolana fandraharahana, voambolana fitantanana, voambolana malagasy, voambolana teknika